Oiri Yemahara Fryer ▷ Mafungiro uye Akanakisa Mhepo Fryers 2022
Oiri Yemahara Fryer
Tefal Actifry 2 mu1
Cecofry Compact Inokurumidza
Mambokadzi Aerofryer XL
Oiri Yemahara Fryer: Mafungiro uye Ndeipi Yekutenga
Iwe unoda kuvandudza chikafu chako usingasiye chikafu chako chaunofarira chakakangwa? Hot air fryer isarudzo yakanaka uye iwe uchangosvika kune referensi yewebhu nezvavo.
Usapotsa madhairekitori edu neakanakisa modhi, tinokuudza mashandiro avanoita, pfungwa dzeavo vakambodziedza uye nekudzitenga kubva mitengo yakanyanya kunaka online kuSpain.
Ndeapi akanakisa parizvino?
Kuenzanisa Fryers pasina Mafuta
Ungasarudza sei uye chii chekutarisa?
Iyo Yemahara Fryer Inoshanda Sei?
Hot Air Fryers Mutengo
Vave vari pamusika kwemakore mashoma ikozvino, asi kuchine vanhu vazhinji vasina chokwadi nezve mudziyo diki uyu. Kana uri pano, imhaka yokuti unofarira kwavari, asi hauna chokwadi vanopa mugumisiro upi uye kana zvakakodzera uye dzakakodzera imba yako. Ramba uchiverenga uye tsvaga ruzivo rwakakwana uye asingasaruri
Isu tinoda kuvandudza uye kuziva kana isu takakubatsira, saka chero mhinduro inogamuchirwa, kunyangwe ichinetsa, tipe miniti 🙂
➤ Kuenzanisa KwemaFryer Akanakisa Asina Oiri
Enzanisa nekukurumidza uye nyore kuti uone misiyano yakakosha uye usarudze kuti ndeipi inokodzera zvirinani zvinodikanwa zvemba yako.
Actifry 2 mu1 XL
➤ Chii Chakanakisisa Chisina Mafuta Pamusika?
Kusarudza kuti ndeipi yakanakisisa haisi kwatiri, kubvira mushandisi wega wega ane zvekutanga izvo zvinosarudza sarudzo.
Chatinogona kukuudza ndechekuti mamodheru anomira pamusoro pemamwe, kungave kwekuita kwavo, pamutengo wakaderera kana kuve nekukosha kwemari.
Tichatanga kuona inonyanya kukosha maficha yezvakanakisa zvishandiso pamusika uye pazasi sarudzo ine mamwe mamodheru anoonekwa.
Mutengo Philips HD9220/20
XL air fryer yemhuri: ine 6,2 l mbiya uye 1,2 kg hombe tswanda inosvika zvikamu zvishanu - 5 pre-set kubika zvirongwa zvine touch screen
Nzira yekubika ine hutano: chikafu chinonaka uye chinovaka muviri chine mafuta anosvika 90% mashoma - Fry, bheka, grill, gocha uye kutopisa zvakare nemutungamiri wepasirese mumafirita emhepo**
Mabikirwo Akasarudzika: Dhawunirodha yedu NutriU app kuti uwane anokurudzira ekurarama ane hutano anoenderana nezvako zvaunofarira - Vatevere nhanho nhanho zviri nyore.
Crispy kunze, yakapfava mukati: Rapid Air tekinoroji ine yakasarudzika-yakaita nyeredzi dhizaini inogadzira yakakwana yekutenderera kwemhepo inopisa kune zvinonaka crispy uye zvinyoro chikafu.
Kuchenesa kusingashande: Airfryer ine midziyo inobvisika-yakachengeteka
✅ Inoratidzirwa Airfryer Zvimiro
6.2 marita malita
2000 W simba
Rapid Air teknolojia
Analog Nguva uye Tembiricha Kudzora
Dishwasher yakachengeteka zvikamu
Yakanaka Feedback kubva kune Vatengi
Kuzivikanwa uye ane ruzivo brand
Kunyangwe paine akati wandei mamodheru anotengesa zvakanyanya, mumwe wevatungamiriri vekutengesa mumhando dzinozivikanwa ndeye Philips HD9280 / 90 kubva kumhuri yeAirfryer.
Chishandiso ichi, kuwedzera kune zvakajairwa zvirevo zvemidziyo iyi, chine Rapid Air tekinoroji. Tekinoroji ine patented philips yakagadzirirwa kuwana chikafu chekubika zvakaenzana nemafuta mashoma.
▷ Tefal ActiFry 2 mu1
Tefal Actifry 2 mumutengo we1
Iyo yakasarudzika 2-mu-1 inopisa mweya fryer Nzvimbo mbiri dzekubikira dzekugadzirira chikafu chese mune imwe kuenda; inosanganisira imwe grill plate yakananga pachigadzirwa
Kutenderera kwemhepo inopisa neruwoko runotenderedza Kubika zvinyoro-nyoro zvekudya zvakakangwa zvine otomatiki tembiricha inodzora, inogonesa kudyiwa kwemafuta mashoma; inogadzirika tembiricha yekunyatsobika mhedzisiro 80 kusvika 220 ° C
9 otomatiki zvirongwa zvakananga pachiratidziro chine hombe yekubata kumeso; kunonoka kutanga kusvika maawa 9 uye chengeta inodziya basa
Kumira otomatiki pakuvhura chivharo, zvese zvinongedzo (ActiFry mbiya, grill, chivharo) zvinobviswa uye dishwasher yakachengeteka; timer ine chiratidzo chezwi
Chii chiri mubhokisi Tefal YV9708 ActiFry Genius XL 2in1, mbiya inobviswa uye grill ndiro, chivharo chinobviswa, chipunu chekuyeresa, bhuku remushandisi
Huru hukuru hwe1.5 Kg: 4/5 Kushumira
1400 W simba
Nzvimbo mbiri dzekubikira
Digital Programmer ine LCD
4 Menyu nemusoro
Repairable kwemakore gumi
Parizvino iyo air fryer ine nzvimbo mbiri dzekubikira inonyanya kutengesa ndeye Tefal Actifry 2 mu1. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha mumuenzaniso uyu mukana wekubika zvokudya zviviri panguva imwe chete.
Iyo zvakare inosanganisira iyo kutenderedza chikopokopo chinobvisa chikafu otomatiki uye anodzivirira kuzviita nemaoko. Mutengo wayo wakati pamusoro, kunyangwe kazhinji ine zvinopihwa zvine madhiresi akanaka.
Cecofry 4D mutengo
Innovative dietetic fryer ine kubika system inobvumira kubika kubva kumusoro, kubva pasi kana panguva imwe chete kubva kumusoro uye pasi, kukomberedza chikafu 360º uye kugovera kupisa zvakaenzana.
Otomatiki fryer inobika nechero mafuta ane 8 pre-set zvirongwa kuti zvive nyore kushandisa uye kunzwisisa: sauté, toast, french fries, oveni, manual, frying pan, mupunga uye yogati. Inobatanidza foshoro yekukuchidzira otomatiki iyo iwe yaunogona kubika nayo nekuedza kushoma uye mubato, zvese zvinobviswa.
Inogadziriswa tembiricha dhigirii nedhigirii kubva pa100 kusvika 240º ine timer inoshanda kubva pa5 kusvika 90 maminetsi kubika ese anobvira mabikirwo. Inosanganisira menyu kuti ugone kubika yoghurt pane preset tembiricha ye60ºC, inogadziriswa kubva pa0 maminetsi kusvika 16 maawa.
Iine sarudzo yekukwanisa kubika ndiro mbiri panguva imwe chete pamatanho maviri nekuda kwegridhi, kukwanisa kubatanidza gadziriro dzakawanda panguva imwe chete, zvichiita nguva yakawanda. Iine 3-litre inokwana mbiya ine matatu-layer stone ceramic coating inogona kubika kusvika 3,5 kg. mbatatisi, kudzivirira chikafu kuti chisanamatira pasi.
Inosanganisira bhuku remanyorero uye resipi bhuku kuti ugone kubika ndiro dzakasiyana nenzira iri nyore ine makumi mana ekubika kuti udzidze kubika neichi mudziyo wekuchinja uye 40 ekuwedzera vhidhiyo mabikirwo ekuona muvhidhiyo fomati kuti zviri nyore sei kubika nechikafu ichi. fryer model. Iyo ine simba re 8 W yekubika chero dhishi zvakanaka. Zviyero zvechikafu ndeichi: 1350 x 31 x (39 cm nemubato) x 47 cm.
✅ Cecofry 4D Zvakanakisa
1350 W simba
Maviri Akazvimiririra Heat Zones
Kicheni pa2 mazinga
8 Preset Zvirongwa
Iyo yeSpanish brand Cecotec inotengesa inopisa mweya fryer yakanyanya kukwana uye inoshanda zvakasiyana pamusika Kusvikira zvino. Kugona kwayo bika zvokudya zviviri panguva imwe chete, foshoro yako inotenderera inobvisika kubvongodza chikafu nekuzara kwayo digital control.
Asi handizvo chete, izvo Turbo cecofry 4d ndiyo yega ine maemitter maviri ekupisa, imwe yakaderera uye imwe yepamusoro, iyo yakazvimirira uye inogona kushandiswa pamwe chete kana zvakasiyana.
▷ Princess mafuta-isina fryer
Aerofryer XL mutengo
Kukwanisa 3.2 Litres: 4/5 Servings
Dhijitari Kudzora nemapurogiramu akasiyana
Kana uri kutsvaga modhi ne kukosha kwakanaka kwemari iwe unofanirwa kufunga nezve iyi ine hutano fryer. Mutengo wayo wekutengesa wakajairika unotenderedza 125 euros asi kazhinji vane zvidzikiso iyo yakawedzera 90 euros. Pane mavhezheni maviri echishandiso ane misiyano midiki yaunogona kuona mukuongorora kwatakaita pawebhu.
Icho chishandiso chine maitiro akanaka ezvese izvo yakagamuchirwa zvikuru pakati pevatengi, vanoipawo kuongororwa kwakanaka. Yayo pamusoro-avhareji simba, simba uye ayo dhijitari inodzora nemapurogiramu akasiyana.
Kana ukaisarudza iwe hauzofaniri kunetseka nezvekuchenesa, nokuti inokodzera kuwacha mudhishi. Sezvauri kuona, haina chainoshaya, uye pamwe chete nemafungiro akanaka evashandisi inoita kuti imire pakati pemamodheru ane mutengo wemhando yepamusoro.
Utano hwekicheni fryer ine 4 kubika modes: fry, grill, roast, kubika uye gratin; kuderedza mafuta nemafuta muzvokudya zvako
800 gr inokwana vanhu vatatu kana 3 kusvika ku4 g yechando chakagadzirwa mumaminitsi gumi nemashanu pa500 C kusanganisira preheating nguva.
Zviri nyore kushandisa 30 min inogadziriswa timer
Hutano hwakakangwa uchishandisa mafuta madiki kana kusavepo kana uchikacha, iwe unobika zvine hutano uye zvinonaka ndiro
Nakidzwa nekudya zvako zvine hutano zvakakangwa usingazadze imba nekunhuhwirira
✅ Inoratidzirwa Zvimiro Fry Delight
800 Grs Kukwanisa: 2/3 Kushumira
Repairable Product 10 makore
Iyi fryer ine hutano ndeimwe yemhando dziripo pakati pezvakanakisa kukosha kwemari. Yayo pvp iri padyo ne150 euros asi inonyanya kuzivikanwa ndeyekuti ine dhigirii rakakura uye iri dzakakomberedza 100 euros.
Icho chigadziro chakaenzana chine tsanangudzo yakakwana yekuita basa rayo zvakakwana uye kubudirira kugutsikana kwevatengi vako. Chinhu chinonyanya kukosha ndeche nyore kushandisa, dhizaini yako uye chii yakavakwa kuti igare uye kukwanisa kugadziriswa kana yaparara.
Fryer Mitengo CompactRapid
Dietary fryer inobvumira kubika nepuni imwe yemafuta, kuwana mhedzisiro ine hutano. Mhedzisiro yakasarudzika mumabikirwo ese nekuda kwePerfectCook hot air tekinoroji.
Inosanganisira basket. Bika kusvika ku400 gramu yembatatisi mune imwe chete. Programmable munguva uye tembiricha.
Ine thermostat inosvika 200 ºC. Inogadziriswa nguva kubva pa0 kusvika ku30 maminetsi.
1,5 litre inokwana mudziyo.
Inosanganisira bhuku rekubika rakazara.
1.5 litre inokwana: 2 servings max
900 W simba
Analog thermostat uye timer
Zvichida mune aliexpress uchawana yakachipa, asi kana uchida shandisa mari shoma Mune Air Fryer tinokurudzira iyo Cecofry Compact Rapid naCecotec. Chokwadi hausi kuzochengetedza zvakawanda nekusarudza china uye mune iyi modhi ye Spanish kambani une waranti yemakore maviri.
Kunyangwe iyo mhando ichizivisa RRP yeanosvika makumi manomwe neshanu euros, kazhinji ine zvidzikiso zvinoiisa anenge 40 euros. Pamutengo uyu hapana chikonzero kana iwe uchida kubika nenenge isina mafuta uye edza kupisa tekinoroji yemhepo.
▷ Ndedzipi mhando dzemhando yepamusoro?
Parizvino ivava mhando ina dzakanakisisa muFryers nemafuta mashoma kune yakakura catalog uye yekuve ne mhando dzinotengeswa zvakanyanya muSpain.
Kana iwe uchida kuona zvishandiso zvavo zvakanakisa uye zvakakwirira zvekambani yega yega tinya pamufananidzo.
Philips Airfryer Oiri Yemahara Fryers
Cecotec Cecofry Oiri Yemahara Fryers
Tristar Oiri Yemahara Fryer
Tefal Oiri Yemahara Fryers
➤ Zvimwe Zvinopisa Mhepo Fryer
Wana wongororo yedu, mavari tinoongorora mamwe mamodheru zvakadzama inowanikwa mumusika weSpanish.
Iwe uchawana iyo zvakanaka nezvakaipa, maonero evashandisi vakatobika navo uye kupi kwaungatenga yako nemutengo wakanakisa.
Vpcok Oiri Yemahara Fryer
Moulinex Nyore Fry Deluxe EZ401D Oiri Yemahara Fryers
Lidl Oiri Yemahara Fryer
Cosori Oiri Yemahara Fryers
Aicok Oiri Yemahara Fryer
Chii chinonzi fryer isina mafuta
Yakava imwe yemidziyo yepamba yakabudirira. Nokuti Vanogona kugadzirira marudzi ese ekubika, ingave yekutanga kana yechipiri makosi uye madhiri, asi pasina mafuta kana nechipunu chete chayo. çIzvi zvinokonzerwa nekuti vanouya nehunyanzvi hutsva hwakabatanidzwa, hunobva pakuti inenge iri mhepo inotenderera nekupisa kwakanyanya uye nekumhanya kukuru. Izvi zvinoita kuti chikafu chive nekupedzisa kwatinoziva, asi pasina kuwedzera huwandu hwemafuta.
➤ Ndeipi Fryer Yemahara Yekutenga?
COSORI Fryer isina ...
Kurudziro yedu ndeyekutenga Brands inopa Technical Service muSpain, yakadai seTefal, Philips, Princess, Cecotec ... Ramba uchifunga kuti yakavharwa uye compact zvishandiso zvinoiswa kune tembiricha yakakwira uye inotambura zvakanyanya, saka iwe uchakoshesa kuve kupi. kuti uigadzirise kana kuti munotenga maspare parts kana muchiida. Ne boom, mhando dzakawanda chena dzakabuda dzisina SAT uye mutsauko wemutengo nemamwe maBrand Models hauna kunyanya.
▷ Ndeipi yekusarudza? Zvinhu zvakakosha
Zvinhu zvakakosha zvikuru Zvinhu zvekuchengeta mupfungwa pakusarudza air fryer ndezvi:
Mamodheru madiki anotengeswa, akanakira vakaroora kana vasina, uye mamodheru akakura emhuri yese, saka iwe unofanirwa kufunga nezvazvo uye sarudza simba rinonyatsoenderana nezvido zvako.
Zviri nani kutenga fryer ine simba usati wadonha, sezvo chiri chinhu chinogona kuita mutsauko mukati kunaka uye nguva yekubika. Chero zvazvingava, simba repamusoro harisi chiratidzo chokuti rinonyanya kushanda, nokuti rinoenderana nenzira iyo chigadziro chinoshandisa simba iroro.
✅ Kuchenesa nyore
Ita kuti zvive nyore kugeza Icho chinhu chakakosha kupfuura chaungafunga pakutanga, kana kuchenesa kuchinetsa uye kwakaoma haugone kuishandisa kudzivirira kusvibisa.
Mutengo wacho kazhinji chinhu chekufunga nezvacho mune chero kutenga, rombo rakanaka une mitengo yese, kunyangwe mumhando dzakanakisa.
✅ Ongororo yeVatengi
Nzira yakanaka yekuita kuti kutenga kwako kuve kwakanaka ndeyekuverenga pfungwa dzevatengi vakambodziedza. Edza kuverenga wongororo uye usangotarisa zvibodzwa, vanowanzoratidza zviri nani chokwadi.
✅ Zvimwe Zvinokosha Zvimiro
Kunyangwe zviri pamusoro apa zviri izvo zvakakosha zvekutanga, pane akati wandei maitiro anogona kuvandudza zvakanyanya ruzivo rwemushandisi uye mhedzisiro yekubika.
Akasiyana-siyana Cooking Levels
Kutenderera Scoop yeKubvisa Chikafu
Yakasiyana-siyana Heat Zones
Zvakanakira zvemafuta asina mafuta
Kana isu tatotaura kuti ipfungwa inopfuura yakabudirira, ikozvino isu tinofanirwa kuziva izvo zvakanakira zvakanakira, zvinova izvo zvinozopedzisira zvatikunda:
Madhishi ane hutano hwakawanda: Ichokwadi kuti dzimwe nguva, nekuda kwekumhanya kwehupenyu hwatinahwo, hatimire kuti tidye chikafu chine mwero. Izvi zvinoita kuti tidye nekukurumidza uye zvakashata, tichitora chikamu chikuru chemafuta kumuviri wedu, iyo ichashandurwa kuva makorikori. Nokudaro, iyo isina mafuta-isina fryer ichawana ndiro dzine utano, kuderedza mafuta aya neanopfuura 80%.
Ichakuchengetedza nguva mukicheni: Deep fryer ndechimwe chemidziyo inokurumidza. Ndiko kuti, munyaya yemaminetsi mashomanana, tichave takagadzirira uye zvinonaka ndiro. Saka zvinodzivirira kupedza nguva yakawanda mukicheni kana kudzora nguva. Sezvo munyaya iyi, iwe unogona kuita chirongwa chinodiwa zvichienderana nechikafu uye nguva yekubika.
Kushandisa simba shoma: Ndechimwe chezvishandiso izvo zvisingashandisi mwenje wakawanda. Saka munyaya iyi tinogona kuienzanisa nechoto.
Batanidza timer: Usanetseka nezvechikafu, nekuti uine timer, unozoziviswa kana chagadzirwa. Uyewo haufaniri kunetseka pamusoro pekushisa nokuti kazhinji vane tembiricha regulator.
Izvo zviri nyore kwazvo kushandisa: Ichokwadi kuti pese patinotenga mudziyo tinotya kuti zvichatiomera kuushandisa, asi handizvo. Ivo vane dhijitari yekutonga kuita iwo chaiwo marongero.
Zviri nyore kuchenesa: Sezvo uchange uri mudziyo watinogara tichishandisa, tinoda kuti uve nyore kuchenesa uye uri nyore. Zvikamu zvaro zvinogona kubviswa uye kushambidzwa mudhishi. Kunyangwe ukaida neruoko, unozviita nesipo nyoro uye chipanje.
Taura zvakanaka kune kunhuwa kwakashata paunenge uchibika: Imwe yemabhenefiti makuru ndeyekuti hauzove nehwema hwakaipa kwemaawa mukicheni yako kana chiutsi chinogona kuoneka nemamwe marudzi emidziyo.
Chii chiri nani, fryer isina mafuta kana nemafuta?
Ichokwadi kuti pane kusava nechokwadi kwakawanda, asi tichakurumidza kuabvisa. Nekuti kutaura kwakafara isu tajaira kana kujaira kufryer nemafuta. Asi mavari tine mari yemafuta akadaro mukuwedzera kune chokwadi chekuti tichave tichishandisa macalorie akawanda uye hachisi chinhu icho hutano hwedu huchatitenda. Nokuda kwechikonzero ichi, mafuta asina mafuta ane hutano uye anotibvumira kugadzira ndiro dzisingagumi.
Saka, pane zvese zvakanaka zvavanazvo, tichagara navo, asi hongu, kunyangwe mhedzisiro yacho yakakwana, ichokwadi kuti. mamwe acho haawane kupera kwakatsetseka semafuta. Ndeipi yaunoda?
Chii chinogona kuita yakadzika fryer pasina mafuta
Fry: Zvinonzwisisika kutaura nezveyakadzika fryer, tinotarisira kubika zvakakangwa. Eya, munyaya iyi akanga asiri kuzosiiwa. Iwe unogona kunakidzwa nemamwe mafries echiFrench, pamwe nechikafu chechingwa chakadai semacroquettes kana steaks.. Asi ndezvekuti mazai akaomeswa anewo nzvimbo pane menyu yakadzika fryer pasina mafuta. Mhedzisiro yacho inopfuura kushamisa uye iwe uchaifarira.
Toast: Pasina kupokana, kupera kwechikafu chega chega kuchataura zvakawanda nezvekunaka kwacho uye tichanyatsoenderana nezvatinoda. Saka, kana iwe uchida imwe inoita kuti chikafu chiite kakunakirwa kunze asi neine muto uye yakatsetseka yemukati, ipapo iwe unogona zvakare kubheja pane iyi basa mufryer yako isina mafuta. Semuenzaniso, nyama, semuenzaniso, ichava imwe yezvigadzirwa zvinozokutendai zvakanyanya.
Bika: Pane nguva zhinji patinoona sei fryer isina mafuta inofananidzwa zvishoma nehovhoni. Izvi zvinodaro nekuti iwowo mweya unotenderera nekumhanya kukuru kuputira chikafu. Saka ndiyo imwe yenzira dzakakurumbira dzekubika. Asi kwete chete kune mamwe madhishi makuru, asiwo ekugadzira dessert.
Asa: Iyo yakagocha yakakwana yatovepo kana zvasvika kune isina mafuta fryer. Kana uri kufunga gadzirira ndiro dzakatevedzana muchimiro chegrill kana barbecue, ipapo unofanira kushandisa basa iri. Nokuti mugumisiro wacho unoshamisawo. Kunyange zvazvo ndiro dzekutanga dzisingararami chete panyama, asi iwe unogonawo kusarudza hove kana kunyange kugocha mbatatisi.
Cocer: Tambotaura kuti haidi mafuta uye patinobika chikafu, kana. Ndiyo imwe yenzira dzakakurumbira dzekubika. Nokuti zviri pamusoro sarudzo ine hutano hwakakwana uye ndizvo zvatinoda. Mukuwedzera, zvakakwana kuzvitarisira pachedu kana kuita mamwe magadzirirwo epakutanga. Zvese zvaunogona kufunga nezvazvo!
➤ Ongororo yevashandisi yeMhepo Fryers
Zvechokwadi iwe unoda kuziva kuti vashandisi vemhepo inopisa fryer vanoti chii. Maonero mazhinji akanaka, kunyange varipowo vasina chokwadi.
Vashandisi vasingagutsikani, kazhinji, vanonyunyuta kuti kana vachikangwa nemafuta mashoma, chikafu hachirambe chakafanana nechakakangwa chikafu. Izvi zvine musoro, asi iwe unofanirwa kugara uchifunga.
Unogona kuverenga zvimwe zve zvirevo kubva kune vakasimbiswa vatengi vanofara, kana kuedza kwawakaita the foodie:
“Ndinoda kuti inosefa oiri ichiichengeta isina mhepo kusvika nguva inotevera. Kupisa kunoratidzika kutsetseka uye nekukurumidza. Ndakaedza mabikirwo akasiyana siyana uye mhedzisiro yagara yakanaka. Zvese zviri crispy uye zvakatsvairwa uye mafuta anoshandiswa haaite seakawandisa. "
“Handisati ndambova nedeep fryer kare uye ndaikahadzika kuti yaizoshanda zvakanaka sei, kana kuti yakasviba sei. Chinhu ichi chikuru! Ndakaita mapapiro nayo. Chinhu chakanakisa ndechekuti zviri nyore sei kuchengeta uye kushandisa zvakare oiri. Iyo system haina zvachose tsvina. Kuchenesa kuri nyore kwazvo sezvo fryer basket, mbiya nepamusoro zviri nyore kubvisa uye kuwacha.
“Chikafu ichi chinopedza dambudziko ripi zvaro ramuinaro pakukangwa. Kuvengwa zvakakangwa nekuda kwehwema netsvina. Iyi yakadzika fryer iri nyore kuchenesa sezvairi kushandisa nekuiisa mudhishi. Chikamu chimwe chete chisingagoni kupinda mumudziyo wekushambidza ndiro chikamu chinopisa, chinocheneswa nyore nyore mudhishi. Iko kusefa kwemafuta kunoshanda nemazvo uye hakugadziri tsvina, ndakakangwa chikafu chechando zvakananga kubva mufiriji, mbatatisi, huku, nezvimwe "
"Kugona chose! Zvinoda ruzivo rushoma kugadzirisa nguva yekukangwa zvakakwana.
Izvo hazvishande zvachose pasina mafuta, asi zviri nani pane hupenyu hurefu hwakadzika fryers.
Ndinoshuva kuti dai paine dzimwe sarudzo dzekuseta tembiricha dzakasiyana. Digital ingadai iri nani, asi chaive chipo chakashamisika kubva kumukomana wangu, saka handigone kunyunyuta. "
▷ Mhedziso Mifreidorasinaoite
Mukuona kwedu isarudzo yakanaka kune avo vanoda kuderedza mafuta mukudya kwako pasina kurega "yakakangwa" zvachose. Inogonawo kuva mudziyo wakanaka wepamba kune avo vanoda kubika muchoto, asi nemukana wekuti yanyanya kugadzikana uye nyore kuchenesa.
Kana ukaitenga uchifunga kuti uchakangwa zvakafanana nemhando dzemazuva ose zvichakuodza mwoyoZvikasadaro iwe zvechokwadi uchafara nekutenga, sevazhinji vashandisi.
Kana iwe usina kugutsikana nemhedzisiro yekuti kubika nemhepo inopisa inopa uye iwe unowanzo fry zvakanyanya, tarisa iyo Mvura Fryer Movilfrit.
➤ Mitengo Yemafuta Emahara
COSORI Fryer isina ... Ona maficha 79.856 Ongororo View deal
4,5L Oiri Yemahara Fryer ... Ona maficha 158 Ongororo View deal
Aigostar Cube - Fryer... Ona maficha 2.550 Ongororo View deal
Cecotec Fryer pasina ... Ona maficha 262 Ongororo View deal
COSORI Fryer isina ... Ona maficha 11.075 Ongororo View deal
COSORI Fryer isina ... Ona maficha 14.504 Ongororo View deal
Zvakanakisa	COSORI Fryer isina ...
Unhu hwemutengo	4,5L Oiri Yemahara Fryer ...
Chatinoda	Aigostar Cube - Fryer...
Cecotec Fryer pasina ...
Mitengo yeLow Oil Air Fryers inowanzo pamusoro pechinyakare. Kunyange zvakadaro, mitengo yakasiyana-siyana yakanaka, uye tinogona kuwana mhando dzinodhura dzakatenderedza 50 euros, kunyangwe dzakashongedzerwa zvakanyanya dzinenge 250 euros.
Kunyangwe iyo RRP yakakwira mune mamwe mamodheru, mukati megore kazhinji pane akati wandei anopihwa ane madhiresi akanaka pamhando dzese. Iwe unogona kuona zvinopihwa zvakanakisa izvozvi nekudzvanya bhatani.
Black Friday Oiri Yemahara Fryers
▷ Ndedzipi dzinonyanya kutengesa?
Rondedzero inogadziridzwa otomatiki maawa makumi maviri nemana nemazon spain vatengesi
With dhisikaundiTop sales
4,5L Oiri Yemahara Fryer ...
▷ Ungatenga kupi chikafu chekudya?
Unogona kutenga fryer yako ine hutano muzvitoro zvenyama kana muzvitoro zvepamhepo, kwaunowana akawanda akasiyana. Ehe, iwe unongowana silvercrest muvharo, uye haisipo nguva dzose.
Nekutenga online tinokurudzira zvakajeka Amazon, izvo zvakaita kuti tivimbe nevatengi vakawanda mumakore achangopfuura. Chokwadi unoziva iyo e-commerce hofori, asi kana zvisiri, isu tichakuudza zvikonzero nei iri imwe yezvakanakisa sarudzo:
Yakakura yakasiyana-siyana yemhando nemhando
Mitengo yakanaka uye zvinogara zvichipihwa
Kukurumidza uye kwakachipa kutumira
Makore maviri emutemo waranti
Maonero evamwe vatengi
Asi kune dzimwe nzvimbo dzekutenga yakachipa isina mafuta-isina fryer:
Amazon: Sezvatinoziva chaizvo, hofori yekutengesa yepamhepo ine marudzi ese emafuta asina-mafuta. Saka tinogona kuwana mhando dzakasiyana, hunhu uye zvese zvaunoda pane zvaunoda zvezuva nezuva. Naizvozvo, pakati pezvakasiyana-siyana, ichokwadi kuti mitengo inogona zvakare kusiyana, ichikuchengetedza iwe pini yakanaka pakutenga kwako.
Dare reChirungu: Iwo mabhureki makuru anosanganawo kuEl Corte Inglés. Saka isu tichatsvaga akanyanya kukosha mamodheru, asiwo iyo nguva nenguva inotengeswa zvakanyanya maererano nehukuru kana nhau. Kana iri mitengo, iwe unogona zvakare kuwana kuderedzwa pane imwe, zvichienderana nemhando.
Lidl: Lidl supermarket Zvinotishamisa padanho rega rega. Nekuti mudziyo wakaita seuyu unoonekwawo mukhathalogi yavo nguva nenguva. Chikafu chemhepo chinotiswededza pedyo chine zvese zvatinoda kuti titakurwe nacho. Yakachipa chaizvo uye iri nyore kushandisa. Asi haisi iyo yega muenzaniso asi yakaratidzawo imwe mhepo inopisa, ine 9 sarudzo mu 1. Zvisarudzo zviviri zvakakwana kuti tikwanise kuzvigadzirisa kune zvatinoda.
mhaswa: Muchiitiko ichi, sarudzo dzakanakisa ndidzowo dzauchawana. Iyo isina mafuta-isina fryer ndeimwe yemidziyo inotengeswa zvakanyanya pawebhusaiti yayo uye nekuwedzera, iwe unogona zvakare kunakidzwa nekuderedzwa pamhando dzinozivikanwa. Kubva kune ma compact modhi kune mamwe ane hupamhi hweovheni. Mitengo ichasiyana pane ese asi iwe uchiri kuwana zvinokwanisika sarudzo.
CECOC: Chiratidzo cheCecotec chakura zvishoma nezvishoma. A niche yakaitwa pakati pevakanyanya kukumbirwa, nekuda kwezvigadzirwa zvavo vane tekinoroji yakabudirira kwazvo. Nokudaro, panyaya yezvikangwa zvisina mafuta vakanga vasingazosari. Ingopinda pawebhusaiti yayo unogona kuona zvese zvazvinokupa, mune yakasarudzika sarudzo yezvigadzirwa uye kwete yekicheni chetea, asi zvemba zvakazara uye kunyangwe nekuchengeta kwako wega. Asi kuchine zvimwe, nekuti zvinokupawo sarudzo yekubika. Chii chimwe chatingakumbira?
mediamarkt: Mediamarkt inokupawo imwe inoshanda kwazvo modhi. Pamusoro pazvose, zvakavakirwa pamhando dzinozivikanwa uye dzine a kukosha kwakanaka kwemari. Iwe unogona kusarudza imwe yakakosha modhi kana imwe ine basa rehovhoni. Ose ari maviri anonatsiridza kubika kwako kwakanaka uye kukubatsira iwe zuva nezuva.
Dzvanya kuti uverenge chinyorwa ichi!
(Mavhoti: 7 Avhareji: 3.3)
Kutsvaga fryer isingadhuri isina mafuta? Tiudze kuti unoda kushandisa marii
⭐ Mafuta Yemahara Fryer
81 mhinduro pa "Fryer isina Mafuta: Mafungiro uye Ndeipi Yekutenga"
Poto yangu ine dambudziko kana miniti yadarika inondipa E1 zvinorevei izvi
Mhoro. Ndine urombo kukuudza kuti pasina kuziva iyo modhi hazvigoneke. Kazhinji E1 inoreva kukanganisa imwe uye inotsanangurwa muchinyorwa mune inowanzoitika zvikanganiso chikamu. Rombo
Ndinoda maFrench fries, bhekoni, huku uye miriwo yakakangwa, asi nekuda kwezvikonzero zvehutano, dzivisa mafuta akawanda, uye naizvozvo, sarudzo yemafuta asina mafuta, inobatsira, inoshanda uye yemazuva ose imwe nzira yekubika kumba.
Mukuwedzera, nyore kuchenesa uye kuchengetedza nguva, tinobika kosi yekutanga mu vitro uye yechipiri kosi mumhepo fryer.
Chii chinonzwika zvakanaka? Zvakanaka, iwe zviri nani kuziva.
Inonzwika zvakanaka uye inonaka zvirinani, haha. Ndatenda nekutora chikamu. Kwaziwai
Iniwo ndinovada, asi kudya kwangu kunonditadzisa, uye handina kumbodya zvakakangwa kwegore rinopfuura 1. ???? Pane mazano echikafu chisina mafuta? Ndatenda
Mhoro Ana.Une zvakawanda zvaungasarudza pawebhu. Kana iyo bhajeti yakanaka isu tinokurudzira Tefal uye kana iri yakasimba mwana wamambo kana moulinex mudhirowa uye cecotec ine inosimudzira paddle uye zvimwe zvinhu. Kwaziwai
Tefal kana COSORI?
Cosori ine zvigadzirwa zvakanaka uye iri nani sarudzo kana uchida madhirowa modhi. Dambudziko nderekuti parizvino hapana Sat muSpain. Sarudzo yakanaka zvakare Tristar, inova yeboka rimwechete saPrincess, kubva kuNetherlands. Kwaziwai
Chikafu chandinofarira kugadzira mumafiritsi akadzama is squid
Chikafu chakakangwa chandinofarira iFrench fries.
Chikafu changu chandinoda kufighter macroquettes.
Dish randinofarira imaringi dzehanyanisi nemahake. Ah uyezve huku nuggets.
Ndinoda kuva nechikafu chakadzama kudaro kuti ndibike zvine hutano uye zviri nyore.
Ndiro yangu yandinofarira yakakangwa icod fritters
Tsvimbo dzehuku dzakarungwa. Uye michero yakaomeswa. Ndakaverenga imwe air fryer inogona kuva nebasa iroro
Ndinoda kubika huku uye machipisi ane hutano!
Zvandinoda zvakakangwa muriwo mu tempura.
Kudya kwangu kwandinofarira mufryer ihuku uye kunyanya mapapiro.
Mamwe chopitos kana mamwe lace.
Handinganeti nekudya zvinonaka zvetequeños zvakakanyiwa chizi (zvakajairwa kuVenezuela uye zvakakangwa), kana ndikahwina fryer ndinokukoka kuti unozvidya kumba.
Haha, izvo zvinogona kutorwa sechiokomuhomwe. rombo rakanaka
Mhoro!! Ndiro yangu yandinofarira yakakangwa: mbatatisi, mhiripiri padrón, anchovies, madhiramu ehuku, mapapiro ehuku… .. Ndinoda dzakakangwa!
Kudya kwangu kwandinofarira iFrench fries
Chandinofarira kudya mapapiro ehuku akakangwa ane mafries.
Madhiri ehuku anonaka.
Chandinonyanya kufarira mazamu akagochwa, uye mbatatisi yakakangwa isina kunyanya kunyudzwa mumafuta.
Iyo inonaka sei iyo fries yeFrench uye croquettes uye kana pamusoro ivo vakagadzirwa pasina mafuta, ivo vakapfuma.
Zvakaoma kusarudza yaunofarira yakakangwa, asi ini ndinoda mapapiro ehuku ane nyuchi uye ane muto mukati. Ahhhhhhmmmmmm
Dzimwe mbatatisi dzakakangwa nemazai neham, nemazai nechorizo, nemazai nepudding nhema; ngatitorei mbatatisisssssssssss… ..pleasure !!!!
Iyo croquettes ndiyo yekutanga kirasi, inonaka !!!
Ndinoda mapapiro ehuku asina mafuta asina mafuta ane mamwe mafries. Zvinonaka !!! Huku nemiriwo, croquettes, nezvimwewo zvakare zvakanaka chaizvo. Ngationei kuti pane rombo rakanaka here ndikawana draw, yangu haisi kunyatsofamba uye rimwe remazuva inomira kushanda.
Zvakanaka, rombo rakanaka. Kwaziwai
Ndiro yandinofarira yakakangwa mbatatisi yakakangwa nemazai.
Zvakanaka, kwandiri silver crest fryer ndeyeumbozha pamutengo wakanaka
Shamwari yangu anayo uye ndakaifarira
Iyo yazvino modhi yakazara kwazvo, dambudziko riripo sezvo richitengesa kunze pakarepo. Padandemutande tine zvimwe zvakaenzana zvakanaka kana zvirinani dzimwe nzira, uye kunyangwe muenzaniso wakafanana. Rombo rakanaka nekutenga.
Ndiro yangu yandinofarira… Mbabvu dzeBBQ nequesadillas?
Inonaka kwazvo asi haina kubikwa, haha. Rombo
Mhoroi, ndinoda ham uye mazai akabikwa, yum yum
Milanesa ine mhiripiri yakakangwa uye mbatatisi ndiro randinoda rakakangwa.
Iyo mbatatisi omelette nehuku yakakangwa, inonaka! Uye kunyanya muzhizha kutora pikiniki.
Mhoroi mose. Kudya kwangu kwandinofarira iskewers. Muchiitiko ichi, ndine chokwadi chokuti ndinoda zucchini uye aubergine nokuti zvinhu zviviri izvo ini nemudzimai wangu tinodya kakawanda.
Ndatenga fryer nhasi mangwanani, ndichimuka ndichinomira mumutsetse. Kana iwe ukaenda kweawa gare gare, hapana kana imwe yasara ...
Kwaziso yakanaka. Robert
Kudya kwangu kwandinofarira i longaniza nemhiripiri uye French fries.
ndiro yangu yandinofarira pasina kupokana… the french fries….
salmon yangu yandinofarira ine fries
Zvandinoda zvakakangwa zvikafu mazai, chorizo ​​​​uye French fries. Kunyange zvazvo isingafaniri kudyiwa kakawanda. ?
Tinowanzo kudya huku mubatter ne "Pilopi" recipe uyewo mbatatisi wedges. Vana vari kupenga nezvavo ... Asi ini nemurume wangu tinofanirwa kudya mafuta mashoma XDD Uye tanga tichifunga nezvekutenga fryer yemafuta kwekanguva asi isu hatisati tagutsikana nemabatiro avanoita ...
Kudya kwangu kwandinofarira ndeye aubergines akakangwa.
Ndafara, zvino ndave kupa amai vangu, resipi yangu yandinofarira ihuku refu yakarungwa sezvandinoda, uye keke responge reremoni.
Kudya kwangu kwandinofarira macroquette, chero zvaari. Vanondirasikirwa...
Ndine maviri, dhirowa neraundi kubva kuTefal uye ndinofara nazvo zvese uye ndiri kutsvaga imwe yeimba yangu yechipiri.
Ndiro yangu yandinofarira yakakangwa i calamari a la Romana.
Yandinofarira Dish huku Nuggets
Chikafu chandinofarira iFrench fries ine mhiripiri.
Zvechokwadi uye pasina mubvunzo ... macroquettes.
Croquettes nehove tsvimbo dzinobuda zvakanaka. Unodzivisa mafuta. Uye mabhisikiti anobudawo zvakanaka. Asi chivi kutora zvishoma.
Zvokudya zvandinofarira ihuku yegariki, French fries uye aubergines.
Chikafu chandinofarira ihuku yakakangwa
Resipi yangu yandinofarira yakapusa: French fries !!
MONICA PASCUAL INAKIDZWA NAYO
ndiro yangu yandinofarira pasina kupokana ihuku, inonaka !!
Chandinofarira kudya makorwe anogadzirwa naambuya vangu
Ndinoda kuedza maprawn ane gabardine, squid a la romana, marinated anchovies, uye .... Zvingave zvinofadza kuzvidya ndisingafungi kuti zvichandipfutisa nei?
Chandinofarira chakakangwa mapapiro ehuku ane fries.
Chandinonyanya kufarira kuita mapapiro ehuku ane mhiripiri yakakangwa, anonaka !!!
Hi, ndiro yangu yandinofarira ihuku mahesera.
NUGGET NEFRENCH FRIES, chikafu chinodiwa chemadhimoni angu maviri madiki
Iyo French fries isina mafuta, inonaka sei uye ishoma sei mafuta !!!!!
Kudya kwangu kwandinofarira:
Breaded huku uye fries fries.
Recipe yangu yandinofarira ndeye miriwo yakaomeswa, yakaomeswa chickpea snacks uye, hongu, iyo bacon cheese fries iri DIVINE.
Zvandinoda zvakakangwa mbatatisi; asi mbatatisi dzisina mafuta asi dzakakora!
Chikafu chandinofarira chiFrench fries nemapapiro, ndinoshuva kuti dai
Ndinoda mbatatisi nemacroquettes
Ndiro yangu yandinofarira yakachekwa yakaomeswa masoseji ari crisp uye asina mafuta
Ndiro dzangu miriwo isina mafuta uye yakabikwa sea bass
Chikafu changu chandinoda hapana mubvunzo chikafu chekudya, nekuda kwemafuta-isina fryer unogona kudya chikafu ichocho nenzira ine hutano.
Chikafu chandinofarira hachisi chepakutanga asi ndicho chaunowana, French fries, haha. Wona kana ndichigona kuvagadzira mahara mune isina mafuta fryer. Kwaziwai
Ndiro yangu yandinofarira, huku mucurry sosi, nembatatisi nehanyanisi.
Ini ndinoda manuggets emumba.
Chinyorwa chakanaka kwazvo, ndatenda nerubatsiro !!
Black Friday Oiri Yemahara Yakadzika Fryers
Cyber ​​​​Monday mafuta-isina fryers
Copyright 2022 Shipping 24h - Yepamutemo vimbiso - Kubhadhara kuri nyore